Card Data Recovey - Ladnaansho xogta laga kaadhka xusuusta, kaarka SD, iwm
Ma u baahan tahay xusuusta kabashada xogta card?
Sida loo sameeyo a soo kabashada xogta kaadhka xusuusta?
1 Ma u baahan tahay dib u soo kabashada xogta kaadhka xusuusta?
Xaaladda 1: kac aan kaadhka xusuusta MMC Sony helay jebin halka aan u insering in aan akhristaha card. Fadlan soo jeedin qaar ka mid kaban karto xogta ka.
Xaaladda 2: Waxaan tirtiray qaar ka mid ah sawirada qaldan oo iyaga doonayaan daafaca. Waxaan leeyahay nooca ugu dambeeya ee Memory ul Duo ee Pro sameeyo Sony iyo Barnaamijka Raysashada Mac.The Memory ah waxaad kala soo bixi kartaa Sony waxaa kaliya loogu talagalay Windows, Halkee ayaan ka heli kartaa Mac Version.
Xaaladda 3: My kaadhka xusuusta SD ee aan hal dhibic oo guji camera ayuu u kharribmay, oo haatan mar kasta oo aan Kaarka ku rid aan laptop, oo dhan ayaa muujinaya qaar ka mid ah waa shaqu shisheeye. Markii aan isku dayaan in ay furto fayl ah, ma furi doonaa.
suroobi karaa waddo si aad u hesho dib u sawirada?
Waxay u egtahay yaqaan? Waxaa jira xaalado ka badan sida in aad u soo gelin maagaalooyinka maanta qaar ka mid ah. Marka idiin timaado, ha ka welwelin. Waxaa jira had iyo jeer waa mushkiladda xal ah. Ka hor inta fulinaya solutio ah, waxaad u baahan tahay inaad lacag bixisid si aad wax muhiim ah in go'aan laga yaabaa in aad dib ugu soo laabtay kaadhka xusuusta ka heli kartaa sawiro aad fiiro. Marka aad sawiro ay sabab u tahay tirtirka, qaab, musuqmaasuqa virus ama sababo kale oo laga badiyay, waxa ugu horeeya ee aad u baahan tahay inaad samayso waa:
• Jooji isticmaalka kaadhka xusuusta in sawiro cusub qaado
• Ha ku wareejin xog cusub kaarka
• Ha isku dayin in uu akhriyo kaarka markii ay noqoto in ay gaari karin
• Ha isku hallaynina kaadhka xusuusta recovey xogta software si fudud oo isku day inaad ku kaarka
• Si fiican Hayso kaarkaaga oo ha sameeyo dhaawac jireed
Waxaa jira talooyin aad u muhiim ah. Si aad ugu soo kaban karto xogta lumay ka kaararka xusuusta waa xaq, maxaa yeelay, xogta lumay aan run ahaantii tageen, sida aan waxtar lahayn oo kaliya calaamadeeyay iyo meel ay ku qaadato waa karo xogta cusub. Sidaas mar xogta cusub ee ku qoran kaarka, xogta lumay la overwritten doonaa oo aan aad u soo kaban karto, iyadoo wax software kabashada xogta kaadhka xusuusta . Sidoo kale, dad badan oo untrusted recovey xogta card uga sii dari kara xogta aad lumin karaa. Iyo dhaawac jirka ka dhigaysa kaarka jebiyey iyo xogta unrecoverable.
2 Sida loo sameeyo a soo kabashada xogta kaadhka xusuusta?
Hel ah reovery xogta card hore: Wondershare Photo Recovery noqon kartaa doorasho wanaagsan (ama Wondershare Photo Recovery for Mac haddii aad isticmaalayso Mac OS X), taas oo ay taageertaa soo kabashada sawir ka kaarka is flash jab, kaarka multimedia, XD, mini SD iyo kaarka micro, aamin ah card digital, kaarka xad-dhaaf ah digital (kaarka telefoonka gacanta, kaarka camera digital), kaarka Picture iyo aaladaha kaydinta multimedia USB kale. Tan ugu muhiimsan, waa amaan ah oo si sahlan ay u isticmaalaan.
Download Free ka soo kabashada xogta software card hoos ku qoran:
Aynu qaadan Recovey Photo ee Windows sida isku day ah oo sameyn ku kaadhka xusuusta kabashada sawir talaabo talaabo ah. Haddii aad tahay user Mac ah, fadlan booqo halkan hago .
Step1 Connect kaarka si aad computer
Geli kaadhka xusuusta aad galay computer ama si toos ah isku xiro qalabka si computer la cable USB ah. Markaas ordi barnaamijka oo guji si "bilow" dib u soo kabashada.
Step2 Dooro kaarka u scan
Step3 Start kabashada xogta card
Dhammaan xogta recoverable ay ka mid yihiin audio, video iyo sawir ku qoran yihiin natiijada iskaanka ah. Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh oo baadh kuwii aad rabto oo ka dhacay on the "Ladnaansho" in ay dib u hesho.
Maxay waa in aad fiiro waa: Ha mar kale lagu badbaadiyo sawirrada kabsaday kaarka asalka, sababtoo ah files cusub overwrite doonaa sawiro lumay. Haddii ay jirto sawir ah oo ka maqan, weli waxaad haysataa fursad labaad si scan iyo kabsado iyaga.
Fiiro gaar ah: dib xogta aad ka kaadhka xusuusta iyo yaanay tani ay mar kale dhacaan.
> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga Memory Card